Maitiro ekugonesa kana kudzima kudzidziswa kuona muWatchOS 5 | IPhone nhau
Rimwe remabasa atinawo pawatchOS 5 kana gare gare ndeyekugamuchira zviyeuchidzo zvekutanga kurovedza muviri. Iri ibasa rinotipa kubatwa pachiuno uye rinobvunza kana tichida kutanga kosi yekudzidzira mushure mekuona kuti tiri kuita chiitiko chisina kujairika uye hatina rekodhi rekudzidzira rakaitwa.
Iine yakavhurwa haina basa kana iwe uchirova iro log rekudzidzira, iwe unowana iyo yese kiredhiti yekurovedza muviri kubva panguva yawakatanga iyo. Iri basa rinoitwa kubva kuKutanga mune yese Apple Watch ine iyi vhezheni yewatchOS 5 kana gare gare yakaiswa, asi inogona kumiswa pese patinoda.
Iyo nguva inotora kuti wachi yako ikuzivise iwe kuti utore Workout inosiyana nemhando yekudzidziswa asi zvinotora maminetsi gumi nguva zhinji. Iyo wachi inotitumira isu zviyeuchidzo zvekushanda uku:
Kumhanya pane treadmill
Kushambira mumvura yakashama
Tingaite sei kuti tisiye basa iri reawa
Vazhinji vashandisi havadi kuita kuti basa iri rishande pachinhu uye nekudaro sarudzo yavanayo ndeyokuimisa nekutadza. Kune izvi isu tinongowana iyo Zvirongwa muApple Watch App > tinya pa General> Kudzidziswa y Kurovedza kutanga chiyeuchidzo. Isu tinobvisa iyo «cheki» uye voila, ikozvino tinogona kuva nechokwadi chekuti wachi haizotinyevere kana ichinge yaona inogona kudzidziswa.
Kana tichida kuti itizivise nezvekuguma kwedzidzo kana tikakanganwa kumisa kunyoreswa, isu tinongofanirwa kuenda kunzvimbo imwechete sepakutanga todzika zvishoma zvishoma tobva tarisa sarudzo inoti Kupera kweyeuchidzo chiyeuchidzo. Zvino nesarudzo idzi dzakaremara hazvichazotinyevera mune chero zvazvingaitika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekugonesa kana kudzima kudzidziswa kuona muWatchOS 5
Basa racho rakanaka asi dambudziko rimwe chete: zuva rega rega ndinoenda kunofamba (kwete zvemitambo) ndinowana "kutanga kurovedza muviri" ndakangwarira uye mazuva ese ini ndinofanira kutarisa "usanyore nhasi"; Chingave chinonakidza kugona kuchitaura nacho zviitwa zvipi zvaunoda kuona kwekutanga kana kupera kwekudzidzira.
Maitiro ekugonesa kana kudzima kudzidziswa kuona muWatchOS 5.
Nekuda kwaMwari, dzidza mutauro usati waisa chinyorwa.
Nhau dzeinotevera PUGB yekuvandudza iyo inosvika nhasi paApp Store